नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा भण्डारी नियुक्त - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं : कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को कार्यकारी निर्देशकमा डा. दीपक भण्डारी नियुक्त भएका छन् ।
कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा डा. भण्डारी नार्कको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। यस अघि नार्कको उपनिर्देशक थिए ।
तीन वर्षदेखि रिक्त रहेको उक्त पदमा भण्डारी नियुक्त भएका हुन् । सँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातवटै प्रदेशमा इजरायली प्रविधियुक्त बागवानी केन्द्र स्थापनाका लागि एमओयू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस गरिमा धानको डीएनए परीक्षण, बीउ नक्कली
बागवानी केन्द्र स्थापनाका लागि एमओयू गर्ने अधिकार इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डा. अञ्जान शाक्यलाई दिइएको छ ।
ट्याग्स: कृषि अनुसन्धान परिषद्, डा. दीपक भण्डारी, नार्क